Mụta ihe niile banyere iyi jet | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ enwere ọtụtụ okwukwo nke na ebughari oyi na okpomoku ma kesaa ya na nkuku nile nke uwa. Ọtụtụ mmiri na-eri nri site na esemokwu na mgbanwe mgbali, ndị ọzọ na ikuku ikuku, ụfọdụ site na ịrị elu nke alụlụ mmiri si n'oké osimiri, wdg.
Taa, anyị bịara ikwu banyere ama ugbo mmiri jet. Ndị a bụ ikuku na-efegharị na oke ọsọ na gburugburu ụwa, site na ọdịda anyanwụ ruo n'ọwụwa anyanwụ, na-eji ohere nke nkwụsị na-adị n'etiti sel ndị na-ebugharị mmadụ. Youchọrọ ịma ka mmiri jet si arụ ọrụ na mmetụta ndị mmiri jet na-enwe na ihu igwe?
1 Jet iyi
2 Kedu mgbe achọpụtara ihe a ugbu a?
3 Njirimara Jet Stream
4 Gutters na azụ
5 Anticyclone nke Azores
6 Jet iyi na okpomoku zuru ụwa ọnụ
A na-akpọkarị ya dị ka iyi mmiri jet, mana enwere nnukwu iyi mmiri anọ na-agba ụwa gburugburu, abụọ na mpaghara ọ bụla.
Nke mbu anyi nwere iyi ugbo elu pola, nke di na 60 Celsius latitude, ma na ugwu na n’ebe ugwu, ma obu maka ya ihe omimi nke ikuku na etiti latitude.
Anyị nwekwara iyi ụgbọ mmiri subtropical na-agbagharị gburugburu 30 Celsius ma ọ dị obere na meteorology nke mpaghara ahụ. N'ihi na nke a nwere obere mmetụta na ihu igwe, iyi polar jet iyi a pere mpe aha ma ewere ya dị ka ihe dị mkpa na nhazi.
Mmiri a na-eru nso na njedebe nke troposphere, ihe dị ka kilomita 10 n'ịdị elu n'etiti etiti, ebe ha nwere ike iru ọsọ pụrụ iche nke ihe dị ka 250 km / h, ọbụna ịnweta ikuku nke ruru 350 km / h. Iji chekwaa mmanụ ọkụ ma belata oge njem, ọtụtụ ụgbọ elu azụmahịa na-efega n'okirikiri mmiri ndị a iji wee rite uru site na ikuku ọsọ.
Etsgbọ mmiri ahụ nwere obosara nke ihe dị ka kilomita 200 na ọkpụrụkpụ nke dịgasị n'etiti 5.000 na 7.000 mita, ọ bụ ezie na ikuku kachasị elu na-erute n'akụkụ ha nke etiti, nke a maara dị ka isi nke jet ahụ. Jetgbọelu na-emetụta Ala Mmiri Iberia bụ polar one.
Kedu mgbe achọpụtara ihe a ugbu a?
A malitere ịmụ ihe ndị a na -emepụta ikuku n'oge Agha Worldwa nke Abụọ na ọmụmụ ihe mbụ ka ọha na eze na njedebe, ebe ọ bụ na n'oge agha ahụ, ọmụmụ ihe a bụ ihe nzuzo ndị agha. Ndị Japan bụ ndị mbụ chọpụtara na nnukwu ikuku na-ekesa site na mgbago ugwu na ndịda ugwu nke nwere ọsọ ọsọ pụrụ iche wee jiri ya wepụta bọmbụ balloon na ndị America.
Na mbu, egwu atụghị na Japan nwere ike ịhazi mwakpo ikuku nke dị ihe dịka 7.000 kilomita site na ibe ya na oke osimiri kewara. Ogologo oge maka ụgbọ elu ndị dị adị fọrọ nke nta ka ọ ghara ịchọta. Agbanyeghị, nchọpụta nke mmiri jet ahụ nyere ndị Japan ohere ịme njem nlegharị anya n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke US, ha chepụtakwara ụzọ aghụghọ. Site na Japan ha na-ewepụta nnukwu ballo ballo nke na-ekowe ọtụtụ ihe mgbawa. Mgbe balloons jisiri iru ugbo elu ha gafere Pacific na oge ndekọ ma site n'enyemaka nke oge ị na-atụba ibu ahụ na ebumnuche ha. Ha jisiri ike gbawaa ihe karịrị 1000 na-agbawa agbawa na-ebute oku n’ọhịa n’ebe ọdịda anyanwụ United States.
Njirimara Jet Stream
Ugbo elu pola na-etolite na mpaghara ebe igwe mmadu na-ekpo oku nke si na Equator bia na ugbua site na North Pole. Mmiri ndị a gbara Earthwa gburugburu na oscillate, na-etolite ebili mmiri nke yiri nke meanders nke osimiri.
Dabere na oge nke afọ anyị nọ na ya, ugbo elu adighi adi otu ebekama nke ahụ, a na-enwe mgbanwe n'oge a. N'oge ọkọchị na oge opupu ihe ubi ọ dị na ihe dịka 50 Celsius North latitude na n'oge oyi ọ bụ ihe dịka 35-40 Celsius N.N. N'oge oyi ike nke jet dị ukwuu karịa n'oge ọkọchị ma rute ọsọ ọsọ karịa. N'oge ọnwa ọkọchị, ikuku ikuku na-ekpo ọkụ na-esiwanye ike, na-asọba iyi ụgbọ mmiri na-aga n'ihu n'ebe ugwu. N’aka nke ọzọ, n’oge udu mmiri, a na-ewusi igwe ikuku ndị dị ike karịa, yabụ ha nwere ike ịgbasawanye na latitude.
Pola Jet kwekọrọ na elu ya na Polar Front na undulations ya, a na-akpọ Ebili mmiri Rossby, na-ebili nrụgide dị elu n'aka nri nke iyi ahụ na nrụgide dị ala n'aka ekpe, nke dị n'elu na-egosipụta dị ka anticyclones (subtropical anticyclones, dị ka anticyclone nke Azores, nke nwere nnukwu mmetụta na mpaghara Iberian Peninsula) na oké ifufe (oke ifufe nke Atlantic nke Polar Front), n'otu n'otu.
Ya mere, ụzọ nke ugbu a na-ekpebi ụzọ nke ifufe Atlantic jikọtara ya na Polar Front. Ọnọdụ traktị nke iyi jet na-adabere kpam kpam na ọsọ ya. Mgbe ọsọ dị elu, ikuku ikuku na-eso ụzọ si ọdịda anyanwụ ruo ọwụwa anyanwụ wee jiri nwayọ oscillates. Mgbe ụdị mgbasa a na-eme ka a na-akpọ ya zonal ma ọ bụ yiri.
N'aka nke ọzọ, mgbe ọsọ nke ugbu a na-ebelata, ebili mmiri na-eme ka ọ pụta ìhè ma na-emepụta ọdọ mmiri miri emi na ndịda na mgbago ugwu, nke sitere na mpaghara nwere obere nsogbu na elu. Mgbe ụdị mgbasa a na-eme, a na-akpọ ya azonal ma ọ bụ meridian.
Gutters na azụ
Osimiri ndị e guzobere site na nrugharị nwayọ nke iyi polar jet bụ ntinye nke ikuku oyi na ndịda nke ụzọ zonal nke ugbu a. Ndị a troughs nwere ihe omimi nke cyclonic ya mere ha jiri pụta n’elu-igwe dịka oke ifufe.
Nọmba dị iche. Ha na-ekwe ka ikuku ikuku dị n'ebe ugwu, anticyclonic na okike, ma doo ihe omuma nke okpomoku di elu na ezigbo ihu igwe. Mgbe etinyere ibe ya na rịrị mmiri ahụ gwakọtara ọnụ ma gbanwee ya, ha na-enye ya mgbanwe dị ukwuu na oge nke etiti latitude.
Mgbe ụfọdụ, igwe ikuku ndị a si na latitude ha na-adịkarị nwere ike ịhapụ ụgbọ elu, nọpụ iche na ya. Ọ bụrụ na ikuku ikuku ahụ sitere na ọdụ ụgbọelu ndị ọzọ sitere na mmiri, a na-akpọ ya nkụda mmụọ dịpụrụ adịpụ na ọkwa dị elu ma ọ bụ karịa nke a na-akpọkarị oyi oyi.
Dịka e kwuru n'elu, Azores anticyclone nwere mmetụta dị ukwuu na ihu igwe anyị na mpaghara Iberian Peninsula. Ya mere, ọ dị mkpa ịmata ihe na-eme n'ime afọ na ya.
Ha na-esite na mpaghara etiti dị n'akụkụ equator. N'ihi oké insolation e nwere intertropical Convergence mpaghara ji ọnụnọ nke oké ifufe. Gburugburu mpaghara a enwere nnukwu mpaghara nke anticyclones nke na-emepụta, dịka ọmụmaatụ, ọzara Sahara.
Otu n'ime anticyclones bụ nke Azores. Mgbe oge ọkọchị rutere na ọnụọgụ nke radieshon nke anyanwụ ka ukwuu, anticyclone na-aza. Antyclone na-arụ ọrụ dị ka ọta na ekweghi ka iru iru eru otutu Spain, ya mere, a gaghị enwe mmiri-ozuzo. Nanị mpaghara na-enweghị nchebe karịa bụ ugwu, ya mere enwere ike ịbanye n'ihu n'ihu etiti Europe. Maka nke a, oge ọkọchị anyị na-edeba obere mmiri ozuzo na ọtụtụ ụbọchị anwụ na-acha, ọ bụ naanị n'ebe ugwu ka anyị nwere ike ịchọta mmiri ozuzo karịa.
N'oge oyi, anticyclone a na - adị obere ma gbadaa na ndịda. Ọnọdụ a ga-enye ohere ịbanye n'ihu site na Atlantic na naanị ihe sitere na ndịda na Canary Islands ga-echebe. Ga-ahapụ uzo ozo n’onu uzo ikuku oyi site n’ebe ugwu.
Ma ụfọdụ mmiri ma ọ bụ autumns dị mmiri ozuzo ma ọ bụ obere na-adabere na oscillations nke Azores anticyclone, nke na-adịghị agakarị nke ọma, mana na-agbago elu na ala. Mgbe ụgbọ mmiri ahụ tụgharịrị, ọ na-eme ka ndị nọ n’ihu banye na mpaghara Iberian Peninsula, mgbe ọ tụgharịrị, ọ na-egbochi ndị isi n’ihu ala anyị, na-enye anyị ụbọchị anwụ na anwụ.
Jet iyi na okpomoku zuru ụwa ọnụ
A na-ekwupụta ya na mgbasa ozi na okpomoku zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ihu igwe na-abawanye ụba na ike nke ọkọchị na idei mmiri. Otú ọ dị, gịnị kpatara na ekwughi. O metụtara mgbanwe ọ na-ewepụta na mmiri jet.
N’ime afọ 15 gara aga, oke ọkọchị na California, oke okpomoku n’Amerịka na Ọdịda Anyanwụ Europe, oke idei mmiri na Pakistan, mere ka ọ kawanye njọ mgbe mgbanwe ihu igwe mmadụ mere megharịrị nnukwu ikuku a.
Ekwesiri iburu n'uche na oburu na anyi gbanwee usoro a na usoro nke mmegharia n'ime ikuku ikuku na oyi na anyi ga adi na-eme ka ebili mmiri na-ekpo ọkụ karị, udu mmiri na iru mmiri ndị ọzọ na ikuku na-eduga na idei mmiri ọzọ. Obere mgbanwe n’osimiri a nwere ike igbanwe ihe banyere ihu igwe uwa, dika idi nway oo n’ikuku. Kedu ihe nwere ike ime ka igwe ikuku oyi na ọkụ na-ekesa na mmiri jet kwụsịlata? Ọfọn nke ọma obere okpomọkụ dị iche n’agbata ikuku ebe okpomọkụ na ikuku. Esemokwu a pere mpe na-eme n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, ebe ọ bụ na ikuku niile dị na mbara ụwa na-ekpokwu ọkụ.
Mgbe emechara otutu ihe omumu, ekwubiwo na mmadu, mgbe mgbanwe nke ulo oru, mere ka mbelata 70% nke ọsọ nke iyi jet. Nke a nwere ike ibute mmụba na oke ihe egwu dịka ụkọ mmiri na idei mmiri.
Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-agbanwe ihu igwe nke ụwa na mmiri ndị a ma ha bụ usoro nke a ga-akwụsi ike ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọnọdụ ihu igwe na-aga n'ihu na-eme n'ụzọ ziri ezi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Jet iyi
VIDEO: Permafrost na-asọ dị ka lava gafee ugwu Tibetan